မုန်လာဥ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါ | Food Magazine Myanmar
မုန်လာဥ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါ
By Dr. Hla Kyi For Food Magazine
မုန်လာဥဖြူ၊ မုန်လာဥဝါနှင့် မုန်လာဥနီဆိုပြီး မြန်မာတွေသိထားကြတဲ့ မုန်လာဥသုံးမျိုးရဲ့ အာဟာရကြွယ်ဝပုံနှင့် လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုပုံတွေကို တင်ပြလိုပါတယ်။ မုန်လာဥတွေဟာ ရေများပြီး ကယ်လိုရီ (Calorie) နည်းတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းနေသူတွေ စိတ်ကြိုက်စားနိုင်တဲ့ အစာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (Carbohydrate) နည်းပြီး သွေးချိုအတက်နှေးတာကြောင့် ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေ စားသုံးနိုင်တဲ့ အစာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေ အများဆုံးသိကြတဲ့ မုန်လာဥဖြူဟာ အတွင်းသားသာမက အခွံလည်းဖြူပါတယ်။ အခွံမဖြူ ပေမယ့် အတွင်းသားဖြူတဲ့ မုန်လာဥဖြူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခွံမှာ အဖြူနှင့် အနီစပ်ကြားဖြစ်နေတဲ့ မုန်လာဥ ဖြူရှိသလို အခွံက အနီရောင်သက်သက်ဖြစ်နေပြီး အတွင်းသားဖြူနေတဲ့ မုန်လာဥဖြူလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာတွေ အများဆုံးစားကြတဲ့ မုန်လာဥဖြူရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်က ရှည်မျောမျောဖြစ်နေပြီး အဖျားသွယ်ပါတယ်။ လုံးဝိုင်းနေတဲ့ မုန်လာဥဖြူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မုန်လာဥများတွင် ပါဝင်နေသော ပင်မအာဟာရ (Macronutrient) များ
မုန်လာဥ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါတွေမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (Carbohydrate)၊ ပရိုတင်း (Protein) နှင့် အဆီ (Fat) ဆိုတဲ့ ပင်မအာဟာရသုံးမျိုး နည်းနည်းစီ ပါဝင်ပါတယ်။ မုန်လာဥ အမျိုးမျိုး (ဖြူ၊ ဝါ၊ နီ) ၁ဝဝ ဂရမ်စီမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ပင်မအာဟာရများနှင့် အင်အား (ကယ်လိုရီ) ပမာဏတို့ ကို ယာဘက်က ဇယားမှာ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
မုန်လာဥဖြူ (Raddish) ထဲက ပင်မအာဟာရများ
မုန်လာဥဖြူ ၁ဝဝ ဂရမ် (၆ ကျပ်၊ တစ်မတ်သားခန့်) စားလျှင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၃.၄ ဂရမ်လောက်သာ ရနိုင် ပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၃.၄ ဂရမ်အနက် တစ်ဝက်ကျော် (၁. ၈၆ ဂရမ်)က သကြားတွေဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်နီးပါး (၁.၆ ဂရမ်) က အစာမျှင် (Dietary Fibre) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥဖြူမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နည်းတဲ့အပြင် သွေးချိုအတက် နှေးစေတဲ့ အစာမျှင်တွေလည်း ပါဝင်နေလို့ မုန်လာဥဖြူစားပြီး သွေးချိုတက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
မုန်လာဥဖြူ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ပရိုတင်းက ဝ.၆၈ ဂရမ် သာ ပါဝင်လို့ နည်းလှပါတယ်။ အဆီကလည်း ပါတယ် ပြောလို့ရရုံ ဝ.၁ ဂရမ်လောက်သာ ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောရောဂါဖြစ်မှာ စိုးရိမ်သူတွေကြောက်ကြတဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဖက်တီးအက်ဆစ် (Saturated Fatty Acid) တွေ၊ ခိုလက်စထရော (Cholesterol) တွေ မပါပါဘူး။
မုန်လာဥဖြူ ၁ဝဝ ဂရမ် စားလျှင် ပင်မအာဟာရ သုံးမျိုးမှရနိုင်တဲ့ အင်အားပမာဏက ၁၆ ကီလို ကယ်လိုရီခန့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီနည်းတဲ့အတွက် မုန်လာဥဖြူဟာ အဝလွန်နေသူတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနေရသူတွေ စိတ်ကြိုက်စားနိုင်တဲ့ အစားအစာမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥဝါ (Carrot) ထဲက ပင်မအာဟာရများ
မုန်လာဥဝါ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၉.၆ ဂရမ်ပါပါတယ်။ မုန်လာဥဖြူထက်များပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် တစ်ဝက်လောက် (၄. ၇ ဂရမ်) က သကြား တွေ ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုတဲ့ အစာမျှင်က ၂.၈ ဂရမ်လောက် ပါဝင်ပါတယ်။ မုန်လာဥဝါမှာ မုန်လာဥဖြူ ကဲ့သို့ ပရိုတင်းနည်းပြီး အဆီကလည်း ပါတယ်လို့ ပြောရရုံ ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥဝါ ၁ဝဝ ဂရမ်စားလျှင် အင်အားအနေနဲ့ ၄၁ ကီလို ကယ်လိုရီခန့်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မုန်လာဥဝါဟာလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနေ သူတွေ၊ ဆီးချိုသမားတွေ ပမာဏအားဖြင့် များများစား နိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဥတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၉. ၅၆ ဂရမ်လောက်သာ ပါပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၆.၇၆ ဂရမ်က သကြားတွေဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုတဲ့ အစာမျှင်က ၂.၈ ဂရမ်လောက် ပါဝင်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာပါတဲ့ ပရိုတင်း ၁.၆ ဂရမ်က မုန်လာဥဖြူ၊ မုန်လာဥဝါတို့မှာထက် ပိုများပါတယ်။ အဆီက ပါတယ်လို့ ပြောရရုံ ဝ. ၁၇ ဂရမ်လောက်သာ ပါဝင်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ ၁ဝဝ ဂရမ်စားလျှင် ရနိုင်တဲ့ အင်အားပမာဏ က ၄၃ ကီလိုကယ်လိုရီခန့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီ ကလည်း ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းနေသူတွေ၊ ဆီးချိုသမားတွေစားနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဥတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါ အမျိုးမျိုး ၁ဝဝ ဂရမ်စီမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဗီတာမင်တွေရဲ့ ပမာဏကို အောက်ကဇယားမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုတာပါ။
မုန်လာဥ သုံးမျိုးစလုံးမှာ ဗီတာမင်များ အမျိုးအစားအားဖြင့် စုံစုံလင်လင် ပါဝင်နေပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါဝင်နေတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးစီရဲ့ ပမာဏကတော့ များများစားစား မဟုတ်ကြပါဘူး။ မုန်လာဥတစ်မျိုးစီမှာ ထူးထူးခြားခြား များနေတဲ့ ဗီတာမင်တွေကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။
မုန်လာဥဖြူ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ဗီတာမင်ဘီဝမ်း (Vitamin B1) က ဝ.ဝ၁၂ မီလီဂရမ်သာ ပါပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ လူတစ်ယောက် တစ်နေ့တာ လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၁ % သာ ရှိပါတယ်။ အခြားဗီတာမင်တွေအနေနဲ့ ဗီတာမင်ဘီတူး (Vitamin B2) ဝ.ဝ၃၉ မီလီဂရမ် (လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၂ %)၊ နိုင်ယာစင် (Niacin) ဆိုတဲ့ ဗီတာမင်က ဝ . ၂၅၄ မီလီဂရမ် (၂ %)၊ ပင်တိုသင်းနစ်အက်စစ် (Pantothenic Acid) ဆိုတဲ့ ဗီတာမင်က ဝ. ၁၆၅ မီလီဂရမ် (၃ %)၊ ဗီတာမင် ဘီဆစ် (Vitamin B6) က ဝ. ဝ၇၁ မီလီဂရမ် (၅ %) နှင့် ဖိုးလိတ် (Folate)ဆိုတဲ့ ဖောလစ်အက်စစ် (Folic Acid)က ၂၅ မိုက်ခရိုဂရမ် (၆ %)သာ ပါဝင်ပါတယ်။ လူတိုင်း စိတ်ကြိုက်စားနိုင်တဲ့ မုန်လာဥဖြူကို ၁ဝဝ ဂရမ်မက များများစားလေ ဗီတာမင်တစ်မျိုးစီရဲ့ ပမာဏ များများ ရနိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥဖြူမှာ အားကိုးရလောက်အောင် များများစားစားပါနေတဲ့ ဗီတာမင်က ဗီတာမင်စီ (Vitamin C) ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥဖြူ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ဗီတာမင်စီ ၁၄. ၈ မီလီဂရမ်အထိ ပါပါတယ်။ အဲဒီပမာဏဟာ လူတစ် ယောက် တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၁၈ % ရှိပါတယ်။ များများစားသည့်တိုင် ဝမှာမကြောက်ရ၊ သွေးချိုတက်မှာ မကြောက်ရတဲ့ မုန်လာဥဖြူကို ၂ဝဝ ဂရမ်စားမယ်ဆိုရင် ဗီတာမင်စီ တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၃၆ % ရမှာဖြစ်ပြီး ၃ဝဝ ဂရမ် စားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၅၄ %အထိ ရနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီဟာ အရေပြား၊ အရိုး၊ အရွတ်၊ သွား၊ သွားဖုံး၊ သွေးကြောစတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ နုပျို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အာဟာရ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြား၊ အရိုး၊ အရွတ်၊ သွား၊ သွားဖုံး၊ သွေးကြောတွေ တည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ကော်လဂျင် (Collagen) ဆိုတဲ့ ပရိုတင်း ထုတ်လုပ်ရာမှာ ဗီတာမင်စီကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုသူတွေရဲ့ ချောမွေ့ နူးညံ့နေတဲ့ အရေပြား၊ ပျော့ပျောင်းပြီး ကျန်းမာနေတဲ့ သွေးကြောတွေ၊ ကြံ့ခိုင်တဲ့အရိုးတွေ၊ ကျန်းမာပြီး ရောဂါကင်းတဲ့ သွားနှင့် သွားဖုံးတွေဟာ ကော်လဂျင်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီချို့တဲ့လျှင် ကော်လဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်တဲ့အတွက် သွေးကြောတွေ မခိုင်ခံ့ဘဲ နည်းနည်းလေး ထိခိုက်မိတာနဲ့ အရေပြားမှာ သွေးခြေဥတတ်ပါတယ်။ အလိုလိုနေရင်းလည်း သွေးခြေဥ တတ်ပါတယ်။ အရိုး၊ သွားနှင့် သွားဖုံးတွေ မကြံ့ခိုင်ပါဘူး။
ဗီတာမင်စီက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့နေလျှင် ကူးစက်ရောဂါတွေကို ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျသွားပါတယ်။ ဗက်တီးရီးယားစတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာ ရင် ခုခံတိုက်ထုတ်တဲ့ သွေးဖြူဥတွေ ထုတ်လုပ်မှုကို ဗီတာမင်စီက အားပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) ရောဂါပိုးတွေကို ခုခံချေမှုန်းရေး လုပ်ငန်းမှာပါဝင်တဲ့ အင်တာဖရွန် (Interferon) နှင့် Antibody ခေါ် ပဋိဇီဝပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လည်း ဗီတာမင်စီက အားပေးပါတယ်။
လူတွေ သောက်တဲ့ ရေ၊ စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေ၊ ထိမိကိုင်တွယ်မိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနှင့် အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေထဲမှာ အဆိပ်အတောက် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါနေပါတယ်။ ဒါတွေကို အဆိပ် အတောက်အာနိသင်မရှိအောင် အသည်းထဲမှာ ချေဖျက် ရပါတယ်။ အဲဒီလို ချေဖျက်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ အင်ဇိုင်း (Detoxifying Enzyme) တွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ဗီတာမင်စီက အားပေးကူညီပါတယ်။
ဗီတာမင်စီမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆဲလ် (Cell-ရုပ်ကလပ်စည်း) တွေ၊ ဆဲလ်တွေထဲက ဒီအင်န်အေ (DNA) တွေ အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးမှုဒဏ် (Oxidative Stress) ကြောင့် မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ အင်တီအောက်စိဒင့် (Anti-Oxidant) အာနိသင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာအပါအဝင် ရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်နည်းသွားပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ ပြည့်ဝသူတွေဟာ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့နေသူတွေထက် အချို့သော ကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ တစ်ဝက်လောက် လျော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့ သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေ ရှိပါတယ်။
မုန်လာဥဝါတွင် ပါဝင်နေသော ဗီတာမင်များ
မုန်လာဥဝါမှာလည်း ဗီတာမင်တွေ အမျိုးအစားအားဖြင့် စုံစုံလင်လင် ပါဝင်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးစီရဲ့ ပမာဏက မုန်လာဥဖြူမှာထက် ပိုများပါတယ်။ မုန်လာဥဝါမှာ ထူးထူးခြားခြား များများစားစားပါနေတဲ့ ဗီတာမင်က ဗီတာမင်အေ (Vitamin A) ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးတွေ၊ သစ်ဥသစ်ဖုတွေမှာ ဗီတာမင်အေ ပါ မပါ သိချင်လျှင် သူတို့ရဲ့ အရောင်ကိုကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ အသားရောင်ဝါတဲ့ (အခွံဝါရုံ မဟုတ်) အသီးတွေ၊ သစ်ဥ၊ သစ်ဖုတွေမှာ ဗီတာမင်အေ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားအရောင်ဝါတဲ့ သရက်သီးမှည့်မှာ ဗီတာမင်အေ များပြီး မဝါတဲ့ သရက်သီးစိမ်းမှာ ဗီတာမင်အေ မပါပါဘူး။ အဝါရောင် ရွှေဖရုံသီးမှာ ဗီတာမင်အေများပြီး မဝါတဲ့ ကျောက်ဖရုံသီးမှာ ဗီတာမင်အေ နည်းပါတယ်။ ရွှေဝါ ကန်စွန်းဥမှာ ဗီတာမင်အေများပြီး အဖြူရောင် ကန်စွန်းဥမှာ ဗီတာမင်အေ နည်းပါတယ်။ ဒါဟာ အသီးတွေ၊ သစ်ဥ၊ သစ်ဖုတွေထဲမှာ ဗီတာမင်အေ ဖြစ်လာမယ့် ဘေတာ ကယ်ရိုတင်း (Beta Carotene) ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းပါခြင်း၊ မပါခြင်း၊ ပါဝင်နေတဲ့ ဘေတာကယ်ရိုတင်း ပမာဏ အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘေတာကယ်ရိုတင်းဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင်အေအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်တာဖြစ်လို့ သူ့ကို ဗီတာမင်အေ ဖြစ်လာမယ့် (Provitamin A) လို့ ပြောခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥဝါ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ဗီတာမင်အေ အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတ်ပေါင်း ၈၃၅ မိုက်ခရိုဂရမ် ပါပါတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက် တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ ၁ဝ၄% လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ဘေတာကယ်ရိုတင်းဆိုတဲ့ ဗီတာမင်အေဖြစ်လာမယ့် ဓာတ်ပေါင်းက ၇၇% လောက် ပါပါတယ်။ မုန်လာဥဝါကို အဝါရောင်ဖြစ်စေတာဟာ ဘေတာကယ်ရိုတင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ညမှောင်ရီဝိုးတဝါးအချိန်နှင့် နေ့ခင်းဘက်ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အနည်းငယ်မှောင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လူတွေ မျက်စိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟာ ဗီတာမင်အေရဲ့ အစွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေချို့တဲ့နေသူတွေဟာ ညအချိန်နှင့် အနည်းငယ်မှောင်တဲ့ နေရာတွေမှာ မျက်စိမြင်နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကြက်မျက်သင့်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါ တယ်။ ကြက်ကလေးတွေ ညဘက်မှာ မျက်စိမမြင်နိုင်ကြတာနှင့် သဘောသဘာဝချင်းတူလို့ ကြက်မျက်သင့်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လို Chicken Eyens လို့ ပြောပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က အတူတူပါပဲ။ မျက်ဖြူသားတွေ ရွှန်းစို တောက်ပ ချောမွတ်နေတာကလည်း ဗီတာမင်အေရဲ့ အစွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့နေသူရဲ့ မျက်ဖြူသားဟာ ခြောက်သွေ့နေပြီး မလိုင်ဖတ်လို အဖတ်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေချို့တဲ့မှု ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အခါ မျက်ကြည်သား (Cornea) မှုန်မှိုင်းလာခြင်း၊ မျက်ကြည်မှာ အနာဖြစ်ခြင်း၊ အနာပျောက်သွားပေမယ့် မျက်ကြည်မှာ အနာရွတ် (အပြင်တိမ်) စွဲပြီး ကျန်ခဲ့တာ ကြောင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ဝက်သက်ပေါက်ပြီး မျက်စိကွယ်သွားခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဗီတာမင်အေချို့တဲ့မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာ မျက်စိကွယ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးအနက် ကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းကလည်း ဗီတာမင်အေချို့တဲ့မှုပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကလေးတွေကို မုန်လာဥဝါကျွေးခြင်းဟာ ဗီတာမင် အေ အာဟာရအခြေအနေကို မြှင့်တင်ရာမှာ ထိရောက်တဲ့ နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်အေဟာ ကူးစက်ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ခုခံ တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်း (Antibody) တွေ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သွေးဖြူဥတွေ ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို အားပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့သူတွေဟာ ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် မကြာခဏ ဖျားနာတတ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ပြည့်ဝသူတွေကတော့ ဖျားနာခဲပါတယ်။ ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း မြန်မြန်နာလန်ထတတ်ပါတယ်။ မုန်လာဥဝါ စားသုံးခြင်းဖြင့် အသက်အရွယ်အားလုံးရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
ဘေတာကယ်ရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ ဗီတာမင်အေအဖြစ် ပြောင်းမသွားလျှင်လည်း သူကိုယ်တိုင်က ဗီတာမင်စီလိုပဲ အင်တီအောက်စိဒင့် (Anti-Oxidant) အာနိသင်နဲ့ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပါတယ်။ မုန်လာဥဝါမှာ ဘေတာကယ်ရိုတင်းအပြင် အခြားကယ်ရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းတွေလည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ မုန်လာဥဝါထဲမှာ များများစား စားပါနေတဲ့ ကယ်ရိုတင်းအုပ်စုဝင် လူတိန်း (Lutein) ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းဟာ မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် တစ်နည်းတစ်ဖုံ အကျိုးပြုပြန်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို ဘဝမှာ မျက်စိကွယ်စေနိုင်တဲ့ Macular Degeneration ရောဂါမဖြစ်အောင် Lutein က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မုန်လာဥဝါ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ၁၃.၂ မိုက်ခရို ဂရမ် (လိုအပ်ချက်ရဲ့ ၁၃%) လောက်ပါတဲ့ ဗီတာမင်ကေ (Vitamin K) ဟာ အခြားဗီတာမင်တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အတော်လေးများတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ကေဟာ သွေးခဲခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်မှာ အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ကေဟာ အရိုးတွေ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ (Beet) တွင် ပါဝင်နေသော ဗီတာမင်များ
မုန်လာဥနီမှာလည်း ဗီတာမင်တွေ အမျိုးအစားအားဖြင့် စုံစုံလင်လင် ပါနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးစီရဲ့ ပမာဏက နည်းပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား များနေတာက ဖောလစ်အက်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ဖောလစ်အက်စစ် ၁ဝ၉ မိုက်ခရိုဂရမ် (၂၇ %) အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်ဟာ သွေးနီဥတွေထုတ်လုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖောလစ်အက်စစ်ချို့တဲ့မှုရဲ့ ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုက သွေးအားနည်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါမှာ သွေးနီဥတွေဟာ ပုံမှန်ထက် ကြီးနေပါတယ်။ ဗီတာမင်ဘီတွဲ (Vitamin B12) ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါမှာလည်း သွေးနီဥတွေဟာ ပုံမှန်ထက်ကြီးနေတဲ့အတွက် ကုသတဲ့အခါ ဖောလစ်အက်စစ် ချို့တဲ့တာလား၊ ဘီတွဲချို့တဲ့တာလားဆိုတာ သေချာအောင် စစ်ဆေးရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗီတာမင် ဘီတွဲချို့တဲ့မှုက ရှားပေမယ့် ဖောလစ်အက်စစ် ချို့တဲ့မှုက မရှားပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာတဲ့အချိန်မှာ ဖောလစ်အက်စစ်ချို့တဲ့လျှင် သွေးအားနည်းရောဂါ ခံစားရပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိစအချိန်မှာ ဖောလစ်အက်စစ် ချို့တဲ့လျှင်တော့ သန္ဓေသားရဲ့ ဦးခွံရိုးနှင့် ကျောရိုးတွေမှာ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မုန်လာဥအမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်နေသော သတ္တု အာဟာရများ
မုန်လာဥတွေမှာ သတ္တုအာဟာရတွေ အမျိုးအစားအားဖြင့် စုံစုံလင်လင် ပါနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတ္တု အာဟာရဓာတ် တစ်ခုချင်းရဲ့ ပမာဏကတော့ များများစားစား မဟုတ်ပါဘူး။ မုန်လာဥနီမှာ မင်းဂနိစ် (Manganese) အတန်အသင့် များတာတစ်ခုသာ ထူးခြားပါတယ်။
မုန်လာဥ အမျိုးမျိုး ၁ဝဝ ဂရမ်စီမှာ ပါဝင်နေတဲ့ သတ္တုအာဟာရတွေရဲ့ ပမာဏကို အောက်က ဇယားမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာလိုအပ်ချက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
အားလုံးကို ခြုံလိုက်လျှင် မုန်လာဥ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါတွေမှာ ကယ်လိုရီနည်းပြီး ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုအာဟာရတွေ စုံလင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနေသူတွေ၊ ဆီးချို သမားတွေအပါအဝင် လူတိုင်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားများတဲ့ ဗီတာမင်တွေက မုန်လာဥဖြူမှာ ဗီတာမင်စီ၊ မုန်လာဥနီမှာ ဗီတာမင်အေနှင့် ဗီတာမင်ကေ၊ မုန်လာဥနီမှာ ဖောလစ်အက်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Dr Hla Kyi